deg deg: Hoggaamiyaha IRAN oo digniin u direy Sucuudiga | Gaaloos.com
Home » News » deg deg: Hoggaamiyaha IRAN oo digniin u direy Sucuudiga
deg deg: Hoggaamiyaha IRAN oo digniin u direy Sucuudiga
Ayatollah Ali Khamenei ayaa dib u cusbooneysiiyey hadaladiisi kulalaa ee uu markasta u jeedin jirey dalka Sucuudi Caraabiya, kadib dilkii Sucuudigu ku fuliyey Wadaad Shiico ah oo u dhashey dalka Sucuudiga.
Hoggaamiyaha ugu sareeya IRAN Ayatollah Ali Khamenei ayaa yiri Sucuudigu waxa uu wajihi doonaa ciqaab rabbi kadib dilkii Sheikh Nimr al-Nimr.
“..Dhiiga loo daaiyey sida dulmiga ah ee shihiidka madluumka ah, shaki iigama jiro dhawaanshaha raadka ay reebeyso, waaana mid rabbi ka aargudan doono, taas oo haleeli doonta siyaasiyiinta Sucuudiga” sidaas waxa uu ka siidaayey khudbad uu ka jeediyey Telifishanka, waxaana uu ku tilmaamey del-delaadii wadaadkii Shiicada ahaa “khal-khal siyaasadeed”.
“Ilaahay ma cafin doono, waxayna ka soo muuqan siyaasiyoonta nidaamka Sucuudiga” ayuu yiri Khumeyni.
Dowlada Sucuudiga ayaa maalintii Sabtida ah shaacisay inay qisaastay 47 maxaabiis ah oo uu ku jiro wadaad caan ah oo kamid ah hogaamiyayaasha Shiicada ku nool Sucuudiga. Wadaadka la dilay oo lagu magacaabo Nimr al-Nimr ayaa kasoo jeeda Shiicada ku nool bariga wadanka Sucuudiga, wuxuuna horey ugu baaqay shiicada bariga dalkaasi oo gaaraya 2 milyan inay dhulkooda ka goostaan wadanka Sucuudiga.
Khamenei ayaa eedeyn u jeediyey dalalka reer Galbeedka ah, waxaana uu aamusnaantooda ku tilmaamey in ay raali ka yihiin waxa Sucuudigu sameeyey.
Dilka wadaadka Shiicadaha ah ayaa caro xooggaan ka abuurey dalka IRAN oo ah dalka ugu weyn ee laga haysto mad-habta Shiicada, waxaana ay weerar ku qaadeen Safaaradii Sucuudiga ee Tehraan, halkaas oo ay dab qabadsiiyeen, meelaha kale ee laga banaanbaxay waxaa kamid ah Baxreyn, Hindiya, Lubnaan iyo magaalda London oo la filaayo in Shiicada ku dhaqan ay banaanbaxaan maanta oo Axad ah.
War ka soo abxay Arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Maraykanku ka wel-welsan yahay dilka Shiikh Namir in ay dhaliso xiisad cusub oo ka dhalata Bariga dhexe.
Title: deg deg: Hoggaamiyaha IRAN oo digniin u direy Sucuudiga